Madaxweynaha Uganda Oo Soo Saaray Amar Xayiraad Ah - Wararka Maanta: Somali...
Madaxweynaha Uganda oo soo saaray Amar xayiraad ah – Wararka Maanta: Somali…
Madaxweynaha dalka Uganda, Yoweeri Museveni oo ka hadlay TV-ga Qaranka dalkaas waxa uu bixiyey amarkaasi, si looga hortago Faafista COVID 19.
Amarkaasi oo maanta dhaqan-geli doono waxa uu socon doonaa muddo 42-maalmood ah.
Madaxweyne Museveni waxa kale oo uu mamnuucay Gaadiidka Dadweynaha ee isaga kala goosha Degmooyinka laga bilaabo bishan June 10-da, si loogu oggolaado Ardayda injay dib ugu laabtaan Guryahooda.
Museveni waxa uu tilmaamay in Caasimadda Kampala noqotay Degmooyinka uu sida xun u saameeyey COVID 19, iyadoo celcelis ahaa maalintiiba la diiwaan geliyo 500 oo Coronavirus.
Dhinaca kale, Khudbadda Madaxweyne Museveni waxa uu jeediyey saacado kadib, markii Warbixin ay Wasaaradda Caafimaadka soo saartay lagu muuiyey in Uganda laga diiwaan-geliyey 1,259 Kiisas cusub oo Coronavirus ah iyo dhimashada in ka badan 9 qof.
Xayiraadda uu Madaxweyne Museveni soo rogay waxa saamayn doontaa Dugsiyada, Masaajida, Kaniisadaha, Wershadaha, Dhismayaasha Ganacsiga, Xafladaha, Suuqyada Xoolaha lagu iibiyo iyo goobaha kale ee ay Bulshada isugu yimaadaan.
Related Topics:al furqan radio wararkaallbanaadir. con wararka maantaamardhacdo wararkamaantaMadaxweynahasaaraySomalisooUgandaWararkaxayiraad
Dad Ku Geeriyooday Shil Tareen oo Ka Dhacay Bakistaan
Hoggaamiyihii Kooxda Boko Xaraam oo la sheegay in uu geeriyooday – Radio…
Wararka Maanta : Guudlaawe iyo A/Madoobe oo sameystay isbaheysi wax looga beddalayo hes...
Wararka Maanta : Musharraxiinta u taagan xilka madaxweynaha oo laga dalbaday inay soo b...
Wararka Maanta : Xukuumadda Sweden oo Weyday Kalsoonida Baarlamanka
STOCKHOLM(Wararka Maanta)-Dowladdii Sweden ayaa maanta la riday kadib markii Stefan Lofven uu noqday ra’iisul wasaarihii ugu horreeyey dalka ee waaya codka kalsoonida, taasi oo macnaheedu yahay inuu is-casilo ama ku baaqo doorasho deg deg ah.
Wararka Maanta : Badmaaxiin la socotay Markab Xamuul oo ku degay Xeebaha Somalia - Radio...
Wararka Maanta : Ururka Taliban ee dalka Afghanistan oo qabsaday degmadii todobaad - Radio...
Toogashada Mareykanka oo faraha kasii baxeysa – Wararka Maanta: Somali…
Ugu yaraan 7 qof ayaa lagu dilay 44 kalena waa lagu dhaawacay, kadib markii toogasho wadareedyo toddobaadkan ay ka dhaceen guud ahaan Mareykanka, sida lagu sheegay xog ay sii daayeen gudiga kormeerka xaquuqda aadanaha ee Mareykanka.
Diiwaanka Rabshadaha ayaa waxaa lagu sheegay in toogashadaan ay ka qayb ahaayeen dadka macangaga ah ee Qoryaha kuwata dalkaasi, waxaana taasi wehliyay in 10 toogasho wadareed ay ka dhaceen sagaal gobol, oo ay ku jiraan New Jersey, Virginia, California, iyo Alaska.
Ugu yaraan hal cunug iyo tiro dhalinyaro ahaa ayaa ka mid noqday dhaawacyada, sida ku xusan diwaanka warbixinta, taas oo inta badan ku saleysan natiijooyinka warbixinnada.
Sannadkan waxaa Mareykanka ka dhacay toogasho wadareedyo gaaraysa 294, sida ku cad diwaanka dhacdooyinka Dalka Mareykanka, iyada oo intaas sii raacisay in 20,694 qof lagu dilay rabshadaha qoryaha fudud. In ka badan 11,352 oo ruux ayaa iyagu si iskood isku dilay.
Itoobiya oo Doorasho Looga Dareeray
ADDIS ABABA(Wararka Maanta)-Dadweynaha Itoobiya ayaa saaka u dareeray goobaha codbixinta, iyagoo dooran doona 547 xildhibaan.
Xildhibaanada lasoo dooranayo waxay ku biiri doonaan baarlamaanka federaalka dalkaasi, xisbigii ugu cod bataana wuxuu iska soo dhex xuli doonaa ra’iisul wasaaraha.
547 goobood ayaa loo asteeyay in ay noqdaan deegaan doorashada baarlamaanka iyada oo 102 goobood oo kuwaasi kamid ah aanay furmin sababo amni darro awgood.
38 deegaan doorasho oo ku yaalla deegaanka Oromada ayaa lagu soo warramayaa in aanay ka dhacayn wax doorasho ah colaado ka jira awgood.
Sidoo kale, deegaanada Soomaalida iyo Hararida ayaaney doorasho ka dhaceyn, iyadoo la qorsheeyey iney halkaasi doorasho ka qabsoonto bisha September ee inagu soo fool leh.
Doorashadan waa tii uggu horeysay tan iyo intii uu xukunka qabtey ra’iisal wasaare Abiy Axmed sanadkii 2018-kii.
Murashaxiin Soomaali ah oo ka tartamaya magaalooyinka waa weyn ee…
Saxarla Cabdullaahi, waxay ka sharaxan tahay magaalada Addis Ababa, waxeyna u tartameysaa baarlamaanka federaalka Itoobiya, waana gabadha keli ah ee Soomaali ah ee Addis ababa ugga tartameysa baarlamaanka federaalka.
Fa’isa Maxamed Cumar, iyaduna waxay ka sharaxan tahay Addis Ababa, waxay u tartameysaa Golaha Maamulka magaalada Addis Ababa, iyadoo ah gabadhii uggu horeysay oo Soomaali ah oo baarlamaanka magaalada Addis Ababa isu soo sharaxday.
Labadan habloodna waxay matalayaan xisbiga talada haya ee PP ama Barwaaqo. Soomaalida kuma badna iney inta badan iska sharaxaan magaalooyinka waa weyn ee dalka Itoobiya.
Wararka Maanta : Qarax Ismiidaamin ah oo ka dhacay Saldhiga ciidanka deegaanka Biyo Cadde ee...